Amin’ny ankapobeny dia mampimenomenona ny maro ny fahatapahan-dalana. Amin’ny lafiny iray kosa dia manantena fivoaran’ny kalitao amin’ireo lalana vaovao ireo mponina. Ny andraikitry ny CUA moa dia ny mifandamina amin’ny Colas izay orinasa nampandraiketana ny asa. “Aiza sy rahoaviana ny asa no atao ary maharitra hafiriana mba hahafahana mandrindra izay fifamoivoizana izay ?”, hoy izy. Io tetikasa io dia efa an’ny fitondrana teo aloha fa fanatanterahana no an’ny amin’izao. Ny asa mandeha rehetra amin’ireo RN1, 2, 4 ireo dia eo amin’ny fandrindrana ny asa no andraikitry ny CUA fa ny tetikasa mifandraika aminy toy ny fanamboarana ny RN 58A, manomboka eo Ankadimbahoaka (ampitan’ny Gastro) mandra-pivoaka any Ampasika mandalo an’Anosizato no nisy ny fivoriana niarahan’ny CUA sy ny IRM eo anivon’ny minisiteran’ny asa vaventy. Mikasika ny fifamoivoizan’ny fitateram-bahoaka, indrindra, ny Taksibe moa dia tsy hiverenana intsony fa efa nivoaka iny ny “cahier de charge” ka izay tratra tsy manaraka azy iny na iza na iza dia efa tapitra ny fotoana fampahalalana ka iharan’ny sazy izy ireo, hoy hatrany i Landy Raveloson.